PITA film – elu onwunwe mbukota ihe onwunwe na safty nkwa.
Site na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị mmadụ na-etinye ahụike na ahụike ka mkpa. Nchekwa nri bụ ihe dị mkpa na-emetụta ahụ ike ndị mmadụ nke ndị na-emepụta nri mba ofesi na-ewere dị ka nnukwu ihe. Nkwakọ ngwaahịa, karịsịa, ihe mbukota ...
Ahịa nke ihe nkiri Optical PET nwere nnukwu ikike: Na mmepe ngwa ngwa nke FPD, teknụzụ nchekwa ike. na ụlọ ọrụ PV, ihe nkiri PET na-egosiputa ihe siri ike. Maka LCD, ọ dịkarịa ala 7-8pcs nke ihe nkiri PET anya na-arụ ọrụ (ihe nkiri 2 na-ekesa ihe nkiri, ihe nkiri 1 prisim, ihe nkiri 2 retardation, 1 a ...
Akụkọ ihe 5, Ihe nkiri BEF.
Ka ọ dị ugbu a, 3M na-akwado teknụzụ ihe nkiri BEF, maka TFT LCD, Merck na Germany gbalịrị imebi ọnọdụ a, usoro a bụ iji mezuo gradient dị na fim site na ịgbasa ọkụ ọkụ kemịkalụ na-emetụta ọkụ site n'aka Mr.DJBroer, Holand, iji mee N.phase BEF film. Mana usoro a nwere ...